Torohevitra 5 hanokafana ny orinasanao madinidinika ao anatin'ny areti-mifindra sy adin-tsaina
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Torohevitra 5 hanokafana ny orinasanao madinidinika ao anatin'ny areti-mifindra sy adin-tsaina
Oktobra 28, 2020
Taona adala ho an'ny rehetra ny taona 2020, indrindra ireo orinasa kely. Miaraka amin'ny roller coaster amin'ny fanidiana, fanokafana ary hatramin'ny fanakatonana indray aza, ny adin-tsaina sy ny fahasosorana amin'ny fitazonana ny orinasanao dia mety hihoatra ny fotoana sasany.
Aza avela hamoha ny volonao ny fisokafan'ny orinasanao (amin'ny fotoana rehetra). Manana torohevitra dimy izahay hanampy anao hanokatra ny orinasanao araka izay azo atao sy amin'ny fomba mahomby.
Manaova fanitsiana ara-batana amin'ny habakabaka
Raha manokatra ny orinasanao amin'ny fotoana rehetra ianao, tsy mandritra ny areti-mandringana 2020 ihany, dia te hanao izany amin'ny fipoahana. Matetika izany dia mila fanovana vitsivitsy amin'ny toerana. Azonao atao ny manamboatra ny toerana misy anao tanteraka, na zavatra vitsivitsy fotsiny no afindranao. Na inona na inona tranga misy, raha misokatra misokatra indray ianao dia manaova fanovana ara-batana amin'ilay habaka.
Nandritra ny Covid-19, ny fanitsiana ilaina dia misy ireo entana mihetsika mba hanomezana elanelana bebe kokoa eo amin'ny mpanjifa sy ny mpanjifa, ny fametrahana tsangambato mba hampirisihana ny halaviran'ny fiaraha-monina, ary na dia ny fanampiana ireo sakana izay tsy azo tazonina ny elanelana ara-tsosialy.
Amboary ny teknikan'ny marketing
Talohan'ny taona 2020, ny marketing dia ny fampiroboroboana ny orinasanao, ny serivisinao ary izay azonao atolotra ny mpanjifa tsirairay. Mandrosoa haingana anio rehefa hisokatra indray ianao dia te hanitsy ny teknikan'ny varotrao hitaratra izany.
Makà fotoana hampiroboroboana ny fanovana mahasoa rehetra nataonao tamin'ny fananganana sy ny asa. Asehoy ny mpanjifanao ny fomba itahirizanao ny olona rehetra araka izay azo atao. Ao amin'ny media sosialy, ampidiro ao ambadiky ny sehatra ireo lahatsoratra momba ny fanadiovana fanampiny, ny fepetra fanampiny napetraka ary ny zavatra hafa rehetra hanamorana ny sain'ny mpanjifa.
Mandritra ny dingana fanokafana anao dia fotoana iray hanamafisana ny drafi-barotrao, indrindra raha nakatona nandritra ny volana maromaro ianao. Ataovy izany amin'ny alàlan'ny fananganana lahatsoratra media sosialy, amin'ny alàlan'ny fijerena endrika matihanina môdely ho torolàlana sy ho mavitrika kokoa amin'ny mpanjifanao amin'ny Internet.
Makà fotoana hanavaozana ny tranonkalanao
Ny fanokafana dia fotoana mety hamerenana amin'ny laoniny ny marikao ary alao sary an-tsaina. Ny fomba iray anaovana izany dia amin'ny fanavaozana ny tranonkalanao, indrindra raha tsy nanao izany ianao nandritra ny taona maro. Ny tranokala vaovao dia toy ny facelift ho an'ny orinasanao izay mahasarika mpanjifa vaovao.
Ampitomboy ny serivisy ho an'ny mpanjifanao
Fotoana tokony hifindrana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao izao. Na dia fitaovana ilaina amin'ny orinasa mahomby amin'ny fotoana mahomby aza ny serivisy ho an'ny mpanjifa, dia mbola zava-dehibe kokoa aza izany rehefa manokatra indray ianao.
Avereno alamino ny mpiasao teknikan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay mitazona ny mpanjifa faly sy miverina bebe kokoa. Makà valiny amin'ny mpanjifanao ankehitriny momba izay azonao hatsaraina. Vonona hihaino foana ary ho vonona hianatra.
Raha miresaka fihainoana ianao, rehefa misokatra indray ianao, dia sokafy ihany koa ny sofinao. Ny mpiasanao sy ny mpanjifanao dia afaka manome valiny sarobidy izay mety hanatsara ny asanao. Raha ny tsy firaharahianao izay lazain'izy ireo sy ny tsy fahalalam-pomba dia mety hanimba ny fahasalamanao.
Aza avela hampivadi-po anao loatra ny fanokafana ny orinasanao. Henoy izay lazain'ny hafa manodidina anao. Fikarohana ny fifaninanana hahitanao ny zavatra ataon'izy ireo ho fomba iray hanamafisana ny aingam-panahy. Rehefa misalasala ianao dia aza matahotra ny hametraka fanontaniana mba hahazoana antoka fa manaraka ny fitsipika rehetra ianao ary mahafeno ny filan'ny mpanjifanao.